I-Archives ye Law & More
Owayengumlingani onelungelo lesondlo akafuni ukusebenza
ENetherlands, ukunakekelwa kungumnikelo wezezimali ezindlekweni zokuphila zalowo owayengumlingani wakho nanoma yiziphi izingane ngemuva kwesehlukaniso. Yimali oyitholayo noma okufanele uyikhokhe njalo ngenyanga. Uma ungenayo imali eyanele yokuzondla, unelungelo […]
Wonke umqashi unelungelo unamalungelo amabili abalulekile: ilungelo lokujabulela ukuphila nelungelo lokuqasha ukuvikelwa. Lapho sixoxe khona ngelungelo lokuqala lomqashi mayelana nezibopho zomninikhaya, ilungelo lesibili lomqashi lafika kubhulogi ehlukile mayelana […]
Uma uqasha indawo yokuhlala eNetherlands, unelungelo lokuqasha ukuvikelwa ngokuzenzekelayo. Okufanayo kusebenza kubaqashi bakho kanye nama-subtenants. Ngokomthetho, ukuvikelwa kwerenti kunezici ezimbili: ukuvikelwa kwentengo yokuqasha kanye nokuvikelwa kokuqashwa ekuqedweni kwesivumelwano sokuqasha ngomqondo wokuthi umninindlu akakwazi ukumane […]
Kunzima ukunquma ukuthi uyathola yini isehlukaniso. Lapho usuthathe isinqumo sokuthi lesi yisixazululo kuphela, inqubo iqala ngempela. Izinto eziningi zidinga ukuhlelwa futhi kuzoba yisikhathi esinzima ngokomzwelo. Ukukusiza endleleni yakho, sizokunika […]
Ukufaka isicelo semvume yokusebenza eNetherlands. Yilokhu wena njengesakhamuzi sase-UK odinga ukukwazi.
Kuze kube ngumhla zingama-31 kuZibandlela 2020, yonke imithetho ye-EU ibisebenza e-United Kingdom futhi izakhamizi ezinobuzwe baseBrithani zingaqala kalula ukusebenza ezinkampanini zaseDashi, okungukuthi, ngaphandle kwemvume yokuhlala noma imvume yokusebenza. Kodwa-ke, ngenkathi i-United Kingdom ishiya i-European Union ngoDisemba 31, 2020, isimo sesishintshile. […]
Isivumelwano sokuqasha sinezici ezahlukahlukene. Isici esibalulekile salokhu umninikhaya nezibopho anazo ngokuqasha. Indawo yokuqala maqondana nezibopho zomnikazi wendawo “yinjabulo umqashi angayilindela ngokuya ngesivumelwano sokuqasha”. Ngemuva kwakho konke, izibopho […]
Yini okufanele uyenze uma ungakwazi ukuhlangabezana nezibopho zakho zokukhokhelwa?
I-Alimony iyisabelo esivela kowakwakwakhe nowakwakhe njengengxenye yesondlo. Umuntu okufanele akhokhe imali yesondlo ubizwa nangokuthi okweletayo wesondlo. Umuntu othola imali yesondlo kuvamise ukubizwa ngomuntu onelungelo lesondlo. I-Alimony yinani lokuthi […]
Ukungqubuzana kwezintshisekelo komqondisi
Abaqondisi benkampani kufanele ngaso sonke isikhathi baqondiswe intshisekelo yenkampani. Kuthiwani uma abaqondisi kufanele benze izinqumo ezibandakanya izintshisekelo zabo? Iyiphi intshisekelo ekhona futhi yini umqondisi okulindeleke ukuthi ayenze esimweni esinjalo? Kunini ukungqubuzana kwe- […]
Shintsha intela yokudlulisa: abaqalayo nabatshalizimali banake!
Unyaka ka-2021 kungunyaka lapho izinto ezimbalwa zizoshintsha emkhakheni wezomthetho nemithethonqubo. Lokhu futhi kunjalo maqondana nentela yokudlulisa. NgoNovemba 12, 2020, iNdlu yabaMamele ivume umthethosivivinywa wokulungiswa kwentela yokudlulisa. Inhloso yalokhu […]
Ubunikazi yilona lungelo eliphelele umuntu angaba nalo ngokuhle, ngokusho kwe-Civil Code. Okokuqala, lokho kusho ukuthi abanye kumele bahloniphe ubunikazi balowo muntu. Ngenxa yalolu lungelo, kukumnikazi ukunquma ukuthi kwenzekani ngempahla yakhe. Okwe- […]
Ukubuyekezwa komthetho we-NV kanye nenani labesilisa / abesifazane
Ngo-2012, umthetho we-BV (inkampani yangasese) wenziwa lula futhi wenziwa waguquguquka. Ngokuqala ukusebenza koMthetho Wokwenza Lula kanye nokuzivumelanisa Nezimo kwe-BV Law, abaninimasheya banikezwa ithuba lokulawula ubudlelwano babo bobabili, ukuze kwakhiwe indawo eningi yokuvumelanisa ukwakheka kwenkampani […]
Ukuvikela Izimfihlo Zohwebo: Yini Okufanele Uyazi?
I-Trade Secrets Act (Wbb) isebenze eNetherlands kusukela ngo-2018. Lo Mthetho usebenzisa i-European Directive ekuvumelaniseni imithetho ekuvikelweni kolwazi olungadalulwanga nolwazi lwebhizinisi. Inhloso yokwethulwa kwe-European Directive ukuvimbela ukwahlukaniswa kwemithetho kuyo yonke […]
Ukuzimela ngokwesivumelwano kwamanye amazwe
Ngokwenzayo, abazali abahlosiwe baya ngokuya bakhetha ukuqala uhlelo lokuzimela phesheya. Bangaba nezizathu ezahlukahlukene zalokhu, zonke ezixhumene nesimo esiyingozi sabazali abahlosiwe ngaphansi komthetho waseDashi. Lokhu kuxoxwa ngakho kafushane ngezansi. Kule ndatshana sichaza ukuthi amathuba aphesheya anga […]
Ukuthola omunye umuntu eNetherlands
Ukukhulelwa, ngeshwa, akuyona inkinga kumzali ngamunye onesifiso sokuba nezingane. Ngokwengeziwe kokutholwa, ukutholwa ngokwesivumelwano kungaba inketho kumzali ohlosiwe. Okwamanje, ukuzala akulawulwa ngumthetho eNetherlands, okwenza isimo somthetho […]
Lapho ingane izalwa, umama wengane ngokuzenzekelayo unegunya lobuzali enganeni. Ngaphandle kwezimo lapho umama uqobo esemncane ngaleso sikhathi. Uma umama eshade nomlingani wakhe noma enobambiswano olubhalisiwe ngesikhathi sokuzalwa kwengane, […]
Umthethosivivinywa Wokwenza Isimanje Ukubambisana
Kuze kube namuhla, iNetherlands inezinhlobo ezintathu zomthetho zokubambisana: ubambiswano, ukubambisana okujwayelekile (i-VOF) kanye nokubambisana okulinganiselwe (i-CV). Zisetshenziswa ikakhulukazi kumabhizinisi amancane naphakathi nendawo (ama-SME), umkhakha wezolimo kanye nomkhakha wezinsizakalo. Zonke izinhlobo ezintathu zobambiswano zisuselwa kumthethonqubo wokuqomisana […]
Njengomqashi, unganqaba ukubika umqashwa wakho ukuthi uyagula?
Kwenzeka njalo ukuthi abaqashi banokungabaza ngabasebenzi babo ababika ukugula kwabo. Isibonelo, ngoba umsebenzi uvame ukubika ngokugula ngoMsombuluko noma ngoLwesihlanu noma ngoba kunengxabano yezimboni. Uvunyelwe yini ukungabaza umbiko wokugula wesisebenzi sakho futhi umise ukukhokhelwa kweholo lize litholwe […]
Umthetho wokwesula emsebenzini
Isehlukaniso sibandakanya okuningi Izinqubo zesehlukaniso zinezinyathelo eziningi. Yiziphi izinyathelo okufanele zithathwe kuncike ekutheni unazo yini izingane nokuthi ngabe senivumelene yini kusenesikhathi ngokukhokhelana nalowo owawuzobambisana naye esikhathini esizayo. Ngokuvamile, inqubo elandelayo ejwayelekile kufanele ilandelwe. Okokuqala kwe- […]
Kuyacasula kakhulu uma imiyalo yakho ingalandelwa ngumsebenzi wakho. Isibonelo, isisebenzi esisodwa ongeke uthembele kuso ukuthi sizovela endaweni yokusebenza ngempelasonto noma lowo ocabanga ukuthi ikhodi yakho yokugqoka ecocekile ayisebenzi kuye. […]
Yini isondlo? ENetherlands imali yesondlo iwumnikelo wezezimali ezindlekweni zokuphila kwalowo owawungumlingani wakho kanye nezingane ngemuva kwesehlukaniso. Yimali oyitholayo noma okufanele uyikhokhe njalo ngenyanga. Uma ungenayo imali eyanele ongaphila ngayo, ungathola imali yesondlo. […]
Inqubo yokubuza e-Enterprise Chamber
Uma kuvela izingxabano enkampanini yakho ezingakwazi ukuxazululwa ngaphakathi, inqubo ngaphambi kwe-Enterprise Chamber ingaba yindlela efanelekile yokuyixazulula. Inqubo enjalo ibizwa ngokuthi inqubo yenhlolovo. Kule nqubo, i-Enterprise Chamber iceliwe ukuthi iphenye inqubomgomo kanye nezinto ezenzekayo […]
Ukuxoshwa ngesikhathi sokuhlolwa
Ngesikhathi sokuhlolwa, umqashi nomsebenzi bangakwazi ukwazana. Isisebenzi singabona ukuthi umsebenzi nenkampani kuthanda yena yini, kuyilapho umqashi engabona ukuthi umsebenzi uwulungele yini lo msebenzi. Ngeshwa, lokhu kungaholela ekuxoshweni kwesisebenzi. […]
Isikhathi sokuqeda kanye nezaziso
Ngabe ufuna ukuqeda isivumelwano? Lokho akwenzeki ngaso sonke isikhathi zisuka. Vele, kubalulekile ukuthi ngabe kukhona isivumelwano esibhaliwe nokuthi ngabe izivumelwano zenziwe mayelana nesikhathi sesaziso. Kwesinye isikhathi isikhathi sesaziso esisemthethweni sisebenza esivumelwaneni, ngenkathi wena [...]
Izehlukaniso zomhlaba wonke
Kwakuvamise ukuba isiko ukushada nomuntu wesizwe esifanayo noma onemvelaphi efanayo. Kulezi zinsuku sekuyinsakavukela ukushada kwabantu bezizwe ezahlukahlukene. Ngeshwa, imishado engama-40% eNetherlands iphela ngesehlukaniso. Lokhu kusebenza kanjani uma umuntu ehlala kwelinye izwe ngaphandle kwe […]
Uma unezingane ezincane futhi uhlukanisa, kufanele kwenziwe izivumelwano mayelana nezingane. Izivumelwano zombili zizobhalwa phansi ngesivumelwano. Lesi sivumelwano saziwa njengohlelo lokuba ngumzali. Uhlelo lokuba ngumzali luyisisekelo esihle kakhulu sokuthola isehlukaniso esihle. Ingabe […]
Ukulwa nesehlukaniso kungumcimbi ongathandeki ohilela imizwa eminingi. Kulesi sikhathi kubalulekile ukuthi izinto eziningi zihlelwe kahle ngakho-ke kubalulekile ukubiza usizo olufanele. Ngeshwa, kuvamisile ukwenzeka ukuthi abalingane besikhathi esizayo bangakwazi […]
Liyini irekhodi lobugebengu?
Ngabe uphule imithetho ye-corona wahlawuliswa? Bese kuthi kuze kube muva nje, ube sengozini yokuba nerekhodi lobugebengu. Izinhlawulo ze-corona ziyaqhubeka zikhona, kepha akusekho inothi kwirekhodi lobugebengu. Kungani amarekhodi obugebengu ebe ameva kangaka ku- […]
Ukuxoshwa kungenye yezinyathelo ezifinyeleleka kakhulu emthethweni wokuqashwa onemiphumela efinyelela kude kusisebenzi. Kungakho wena njengomqashi, ngokungafani nomsebenzi, ungeke wakubiza nje ngokuthi akushiye. Ngabe uhlose ukuxosha isisebenzi sakho? Uma kunjalo, kufanele ukhumbule izimo ezithile […]
Umonakalo uthi: yini okudingeka uyazi?
Isisekelo esiyisisekelo siyasebenza kumthetho wesinxephezelo waseDashi: wonke umuntu uthwala owakhe umonakalo. Kwezinye izimo, akekho noyedwa onesibopho. Cabanga, ngokwesibonelo, ngomonakalo owenziwe yisichotho. Ingabe umonakalo wakho ubangelwe othile? Uma kunjalo, kungenzeka kuphela ukunxephezela umonakalo uma […]
Izimo kumongo wokuhlanganiswa komndeni
Lapho owokufika ethola imvume yokuhlala, unikezwa nelungelo lokuhlanganiswa komndeni. Ukuhlanganiswa komndeni kusho ukuthi amalungu omndeni ophethe isimo avunyelwe ukuza eNetherlands. Isigaba 8 se-European Convention on Human Rights sihlinzeka ngelungelo […]
Ngaphansi kwezimo ezithile, ukunqanyulwa kwesivumelwano sokuqashwa, noma ukusula emsebenzini, kuyinto efiselekayo. Lokhu kungaba njalo uma izinhlangothi zombili zicabanga ukusula emsebenzini futhi zenze isivumelwano sokuyekiswa maqondana nalokhu. Ungafunda kabanzi mayelana nokuqedwa kwemvume ngokuvumelana kanye nangesivumelwano sokuqeda kusayithi lethu: Dismissal.site. Ngaphezu kwalokho, […]
Noma ngabe yimuphi umsebenzi owenzayo, umthetho oyisisekelo eNetherlands ukuthi wonke umuntu kufanele akwazi ukusebenza ngokuphepha nangokwempilo. Umbono walesi sisekelo ngukuthi umsebenzi akumele uholele ekuguleni ngokomzimba noma ngokwengqondo hhayi nakancane ekufeni ngenxa yalokho. Lo mgomo […]
Isivumelwano esiyimpoqo: Ukuvuma noma ukungavumelani?
Umuntu okweletwayo ongasakwazi ukukhokha izikweletu zakhe ezingakakhokhelwa unezinto ezimbalwa angakhetha kuzo. Angafaka isicelo sokuqothuka kwakhe noma afake isicelo sokwamukelwa ohlelweni lokuhlelwa kabusha kwezikweletu ngokusemthethweni. Umuntu okweletwayo angafaka isicelo sokuqothuka kwalowo omkweletayo. Ngaphambi kokuba okweletayo abe […]
Icala elaziwa kakhulu le-2019 : Isigungu esilawulayo saseMexico iCRT (uConsejo Regulador de Tequila) sase siqale icala elibhekene noHeineken elalisho igama elithi Tequila emabhodleleni alo eDesperados. IDesperados ingeyeqembu elikhethiwe likaHeineken lemikhiqizo yamazwe omhlaba futhi ngokusho kukabhiya, "yi-tequila ubhiya onephunga elimnandi". Ama-Desperados […]
Bobabili abasebenzi nabaqashi bangahlangana nokuxoshwa ngezindlela ezahlukahlukene. Uyazikhethela wena noma cha? Futhi ngaphansi kwaziphi izimo? Enye yezindlela ezinqala kakhulu ukuxoshwa ngokushesha. Ingabe kunjalo? Lapho-ke inkontileka yokuqashwa phakathi kwesisebenzi nomqashi izophela khona manjalo. […]
Okudala Okuthunyelwe →